Ukuphononongwa kokuqala kwemoto encinci yasekhaya sele ivele | IPhone iindaba
UToni Cortés | | IPod Home
I-Apple iceba ukuhambisa iiyunithi zokuqala ze-MiniPod mini kubasebenzisi abasele beyibekile iodolo ukusukela nge-16 kaNovemba. Kodwa njengoko kusoloko kusenzeka, kukho abanye "abaxhonyiweyo" ukukhuphela ababhalileyo abasele beyifumene (hayi eyethu imeko) kwaye sele beqalisile ukupapasha umbono wabo wokuqala.
Abokuqala abahlanu abasele bebhalile malunga noko bakubonileyo (nabakuvileyo) ngesixhobo esitsha bavumile: uyilo oluhle kakhulu kunye nesandi esimangalisayo sobungakanani bayo. Makhe sibone ukuba yintoni enye abayithethileyo.
Njengasekuqaleni senze kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kunye ne-iPhone 12 mini, safumanisa ukuba abanye ababhali beendaba baseMelika sele beyifumene entsha IPod yasekhaya mini Phambi kokuba kuthunyelwe izinto zokuqala ezicwangciselwe uNovemba 16, kwaye siza kushwankathela oko bacinga ngomntakwabo omncinci we-Apple's HomePod.
Izimvo ezintlanu ezahlukeneyo zemoto encinci yasekhaya
UBrian Web de TechCrunch ubhala ukuba i-99 Euro HomePod mini ibonelela "ngesandi esikhulu" ngesayizi kunye nexabiso. Ukuphononongwa ngokukodwa kudumisa isandi esinga-360.
Ucinga ukuba ngelixa iAmazon itshintshele kwisithethi sangaphambili se-Echo entsha, iApple iyaqhubeka ukugxila kwisandi se360-degree. Uthi usebenzise itoni yezithethi ezahlukeneyo ezikrelekrele, kwaye uyachukumiseka sisandi inkampani eye yakwazi ukuyenza ngesixhobo esizi-intshi ezi-3,3.
En Engadget, UNathan Ingraham ikwancoma umgangatho wesandi wasekhaya wePod, ngokuba sisithethi esincinci. Ucinga ukuba izandi zilungile, okoko igcinwe kwigumbi elincinci. Ungalibali ukuba sisithethi esincinci, kwaye imimangaliso ayinakufezekiswa.
Ukudityaniswa kwayo kunye ne-ecosystem yeApple kunye nexabiso eliphantsi ngokungathandabuzekiyo liya kulidlala.
A UDan Seifert de esengozini, ayisiyolisi nje kuphela. Ucinga ukuba i-MiniPod mini ayivakali ilungile njengezinye izithethi ezikhuphisanayo ezinamaxabiso afanayo. Ithi iyasilela kumgangatho wesandi sezithethi kuluhlu olufanayo, njenge-Echo kunye neNest Audio.
UTodd Haselton chaza kwi CNBC iApple ifuna ukwenza umhlaba olahlekileyo ngokuchasene neEcho yeAmazon, kwaye izakuzama nge MiniPod yasekhaya. Uyayincoma indlela adityaniswe ngayo kwi-Apple ecosystem, eyilawula nge-iPhone yakhe.
En CNET, Ixabiso likaMolly Ucinga ukuba esi sithethi se-Apple siza kuthengisa njengama-hotcakes. Ingakumbi kubantu abaqhelene nokunxibelelana noSiri. Ngexabiso elifanelekileyo, wonke umlandeli weapile elilumkileyo uya kuyifumana.
UNicole nguyen bhala kwi The Wall Street Journal ukuba i-HomePod mini ijoyine umlo phakathi kweNest Audio kunye neAmazon Echo. Izithethi ezintathu ezikrelekrele ezinexabiso elifanayo. Okokugqibela ukufika kunenzuzo ye-Apple ecosystem.
Ngamafutshane, phantse wonke umntu ucinga ukuba isandi se-HomePod mini siyamangalisa, sijonga ubukhulu bayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, kwintengiso yesithethi esi-smart, iAmazon neGoogle ziinkokheli. Kodwa i-HomePod entsha iyayithanda i-apile encinci eprintwe kwiscreen esisekweni. Ixabiso layo eliphantsi liyakwenza ukuba umkhosi wama-Apple uhambe kuwo ngaphandle kwamathandabuzo. Iya kuba sisipho esihle kuleKrisimesi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » IPod Home » Ukuphononongwa kokuqala kwe-MiniPod mini sele ivele